Nagu saabsan - Kunshan Qiangdi Qalabka Shiidi doona Co., Ltd.
Kunshan Qiangdi Mashiinka Qalabka Co., Ltd. waa shirkad tiknoolajiyad sare xirfad sare ku hawlan qalabka budada R&D, wax soo saarka iyo iibinta. Taas oo ku taal magaalada biyo quruxda badan ee Jiangnan Road Youde Road Zone High 一 Tech Zone, Magaalada Kunshan, Gobolka Jiangsu. Waxaan had iyo jeer si kal iyo laab ah ugu adeegnaa macaamiisheenna. oo ku adkeyso mabda'a ah "Tayada Koowaad, Ku dadaalaysa hal-abuurnimada iyo horumarka" si loo helo xalka guud ee macaamiisheena tayada leh.
Ka sokow, waxaan ka gudubnay xaqiijinta tayada shirkadda ISO9001: 2008.
Waxaan haynaa injineero badan oo cilmi baaris iyo injineero horumarineed ah oo in ka badan 20 sano khibrad shaqo u leh shirkadaha waaweyn, Shirkad gaar loo leeyahay, waxaan sidoo kale leenahay faa iidooyin dabacsanaan leh xagga wax soo saarka, Tikniyoolajiyadda Hal-abuurka, soo-saarka iyo waqtiga gaarsiinta, gaar ahaan maamul-bixinta adeegga ka dib iibka. Waxaan hadda diiradda saareynaa horumarinta iyo soo saarista qalabka budada-dhamaadka sare, wax soo saarka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah mashiinka diyaaradeed ee dareeraha leh, nooca nooca dhejiska leh ee dhejiska leh, qalabka 'jet ultrafine pulverizer', fasalka hawada, dawooyinka iyo cuntada diyaaradda diyaaradeed ee hoos yimaada shuruudaha GMP / FDA , sunta cayayaanka ee caqliga leh oo shiidaya & nidaamka isku qasida iyo nidaamka carqaladeynta jet caqli-galka caqliga leh iyo wixii la mid ah. iyo sidoo kale waxaan ku haboon nahay inaan barano macaamiisha si aan ugu fidino adeeg iyo xalka ugu wanaagsan.
Waxaan u dhoofineynaa badeecadeenna adduunka oo dhan: Ameerika, Yurub, Australia, Afrika iyo Koonfur-bari Aasiya iyo qaybo kale oo adduunka ah, sida Jarmalka, Baakistaan, Kuuriya, Fiyatnaam, Hindiya, Talyaaniga, Burma iwm. hawlaheena, ganacsiga QiangDi wuxuu si aad ah u balaaranayay sanadihii la soo dhaafay.
Laakiin waligeen kama joojinayno baacsigayaga heer sare waxaanan si daacad ah u jecel nahay inaan la wadaagno ganacsigan rajada leh dhamaan shuraakada ganacsiga qaab laba-guul ah.
Waxaan diiradda saareynaa horumarinta iyo soo saarista qalabka budada-dhamaadka sare, waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah mashiinka diyaaradeed ee dareeraha lagu sarreeyo, nooca mashiinka dhejiska leh ee loo yaqaan 'super supers jet jet, jet ultrafine pulverizer, air classifier, pharmaceutical and food-grade jet mill under GMP / FDA, sunta cayayaanka ee caqliga leh oo shiidaya & nidaamka isku qasida iyo nidaamka qashin-furka jet caqli-caqli leh, nidaamka boodhka Enviromental iyo Vetical Wet walaaqaya Mill iwm.
Waxaan had iyo jeer si kal iyo laab ah ugu adeegnaa macaamiisheenna. oo ku adkeyso mabda'a ah "Tayada Koowaad, Ku dadaalaysa hal-abuurnimada iyo horumarka" si loo helo xalka guud ee macaamiisheena tayada leh.